स्वास्थ्य पेजशल्यक्रियाको कति दिनपछि यौन सम्पर्क गर्नु हुन्छ ? - स्वास्थ्य पेज शल्यक्रियाको कति दिनपछि यौन सम्पर्क गर्नु हुन्छ ? - स्वास्थ्य पेज
यौन एक शारीरिक क्रिया भएपनि यसमा मानसिक तयारी र उपस्थिती अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले यौन सम्बन्धका लागि श्रीमान र श्रीमती दुबै शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रुपमा समेत तयारी हुनुपर्छ ।मानसिक तनावको अवस्थामा वा कुनै मानसिक समस्या छ भने त्यस्तो बेला यौन सम्पर्कबाट आनन्द लिन सकिदैन । डिप्रेसन, तनाव जस्ता कुनैपनि समस्यामा यौनको रुची नै जाग्दैन । दम्पतीमध्ये एकलाई प्रजनन अंगको समस्या छ भने पनि यौन सम्बन्ध बनाउनु हुँदैन ।
कतिपय दम्पतीले मासिक स्रावको बेला यौन सम्पर्क राख्दा बढी आनन्द अनुभव गर्न सक्छन् । कतिपयलाई पनि यस्तो अवस्थामा असहज लाग्न सक्छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार यदि दुबै पार्टनरलाई कुनै समस्या नभए र यौन इच्छा भएमा शारीरिक सम्बन्ध बनाउन सक्छन् । तर, मासिक स्रावको बेला कतिपय महिलाहरुलाई असह्य पीडा, छटपटी हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा यौन सम्बन्ध बनाउन ठीक होइन ।त्यसैगरी कतिपय दम्पतीले के सोच्ने गर्छन् भने मासिक स्रावको बेला यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहने जोखिम हुँदैन । तर, चिकित्सकहरु यो कुरामा विश्वस्त छैनन् । मासिक स्रावको बेला गरिने यौन सम्पर्कबाट गर्भ रहन पनि सक्छ ।